महाभारत, श्रीकृष्ण र कूटनीति | मझेरी डट कम
editor — Fri, 08/26/2016 - 21:57
भाद्र कृष्णाष्टमी नजिकिँदै गर्दा गाउँ–सहरका कुनाकाप्चा कृष्ण भजनले गुन्जायमान हुन थालेका छन्। हिन्दी सिरियलहरू श्रीकृष्णमय भइसके। प्रेमका ईश्वर अनि संसारमा अन्याय र पाप नाश गर्न आएका विष्णुका आठौँ अवतारका रूपमा कृष्णको आराधना गरिन्छ। आफ्नो आस्थाका युगपुरुषलाई पुज्ने र ईश्वरका रूपमा सम्मान गर्ने मानिसको अधिकारलाई म सम्मान गर्छु। म आफै पनि हिन्दू संस्कृति र परिवेशमा हुर्केको हुँ। तर, म पूराण युगलाई समाजशास्त्रीय आँखाले हेर्न रूचाउँछु। रजनीकान्त शास्त्रीको 'हिन्दू धर्मका उत्थान और पतन', देवीप्रसाद चट्टोपाध्यायको 'लोकायत', भारतको विश्व बुक्सका आलोचनात्मक प्रकाशनहरू मेरो दृष्टिकोणका सहायक हुन्।
'गीता'मा कृष्णले अर्जुनलाई दिएको एउटा प्रमुख उपदेश हो, कर्म गर, फलको आश नगर। यसको अन्तर्य कर्मयोगमा छ जुन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। पहिरो लाग्ला वा बाँदरले नाश गर्ला भनेर किसानले बाली लगाउन छाड्दैन। एल्बम नबिक्ला भनेर संगीतकारले नयाँ मुर्च्छना रच्न छाड्दैन। पाठक कम छन् भन्दैमा कविले कविता लेख्न छाड्दैन। सयौँ प्रयोगको असफलतापछि स्टिभ जब्स हरेक कोठामा अट्ने कम्प्युटर बनाउन सफल भए। ९ सय ९९ पटकको असफलतापछि पनि थोमस एल्बा एडिसनले बिजुलीको चिम बनाइछाडे। यही हो कर्मयोग।
तथापि, कृष्ण स्वयंका क्रियाकलाप कर्मयोगको चोखो भावनाले प्रेरित थिएनन्। अनर्थमा यमुना किनारको नागबस्ती नाश गर्नु, शिशुपालले बिहे गर्न लागेकी युवती अपहरण गर्नु, सानो निहुँमै शिशुपालको हत्या गर्र्नु, आफैले आमा भनेर बोलाएकी कुब्जासित संसर्ग गर्नु, क्षत्रीय जातित्वमाथि दम्भ गर्नु आदि उनका क्रियाकलाप त्याज्य छन्। यस्ता उपद्र्याइमा पाण्डवलगायत उनका अनुगामीहरू जयजयकार गर्दै नाचगान गर्थे। विजेताको स्तुति गर्ने र तिनकै पक्षमा इतिहास लेख्ने परम्परा सायद यस्तै प्रसंगबाट प्रेरित हुन्छ। महाभारतका रचनाकार व्यासले लगभग पाँच हजार वर्षअघिको त्यस युगलाई धर्मयुग मानेका छन्। यथार्थमा त्यो जातिवादी अर्थात् ब्राह्मण–क्षत्रीको उच्चतावादी युग थियो। अन्य जातिको त्यहाँ कुनै आत्मसम्मान थिएन। नत्र सूतपुत्र भनिएका कर्णको बारम्बार अपमान हुने थिएन। धनुर्विद्यामा अर्जुनभन्दा निपुण शुद्र एकलव्यको बूढीऔँला काटिने थिएन। असुर र वर्णव्यवस्थामा 'तल्लो जाति'का व्यक्तिको हत्यालाई सामान्य मानिने थिएन।
वास्तवमा सनातन समाजका यी युगपुरुष महत्वाकांक्षालाई निरन्तर पछ्याइरहने अत्यन्त चलाख, बौद्धिक र कूटनीतिक व्यक्ति थिए जसलाई ईश्वर बनाएर वेदव्यासले 'महाभारत' लेखे। चलाखीपूर्वक प्रचारयन्त्र प्रयोग गरी उनी ईश्वर र युधिष्ठिर सत्यवादी कहलिए। यही 'योग्यता'को अभावमा सत्य र इमानमा निष्ठावान् महावीर कर्ण युद्धसंहिताविरुद्ध मारिए र खलनायक ठहरिए।
'मोदीआइन' को प्रश्न
विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको लघु उपन्यास 'मोदीआइन'ले महाभारत युद्धलाई मानवताको महाविनाश ठान्छ। अर्जुनले युद्ध नगर्न धनुषवाण बिसाएको र उद्दण्ड भीमसेनले समेत शान्तिको चाहना व्यक्त गरिरहेका बेला द्रौपदीले प्रतिशोधको बाचा सम्झाएकी थिइन्। कृष्णले युद्धको अनिवार्यताबारे प्रवचन दिएका थिए। उपन्यासकी प्रमुख पात्र नारी भन्छे, 'कृष्ण त भगवान् हुन्, उनी हामी मान्छेको प्रेम, भावना र संवेदनालाई किन महत्व दिन्थे! उनी त युद्ध गराएर यो सुन्दर मानव संसारलाई क्षतविक्षत पार्न चाहन्छन्।' मोदीआइनले यसरी महाभारत युद्धको औचित्य र कृष्णको देवत्वमाथि सूक्ष्म तरिकाले प्रश्न उठाएको छ।
भारतको विश्व बुक्सद्वारा प्रकाशित 'श्रीकृष्ण एन्ड हिज गीता'का अनुसार उनको जन्म पाँच हजार वर्षअघि भएको अनुमान छ। त्यतिखेर आर्य जाति उत्तर भारतका नदी किनारतिर फैलिएर त्यहाँका बासिन्दासँग घुलमिल भइसकेका थिए। स–साना गणराज्य थिए। जरासन्ध, कंश, शिशुपाल, द्रुपदलगायत राजा थिए। अहिलेको नयाँ दिल्लीमा सबैभन्दा समृद्ध, शक्तिशाली र व्यवस्थित हस्तिनापुर राज्य थियो। खेती र गाईपालन मुख्य व्यवसाय थिए। युद्धका मुख्य हतियार धनुषवाण र गदा थिए। सवारीका रूपमा रथ र घोडाहरू उपयोग हुन्थे।
दुर्योधन वीर थिए। गदा युद्धमा भीमले पनि उनलाई जित्न सक्दैनथे। अर्जुन धनुर्विद्यामा सर्वश्रेष्ठ ठहरिए। पिता धृतराष्ट्रदेखि राज्यसभाका सबैले सदैव अर्जुन र पाण्डवहरूकै प्रशंसा गर्थे। यसले दुर्योधनको ईर्ष्या चुलियो। एकदिन राज्यसभा र सारा जनतासामु अर्जुनले अनुपम धनुर्विद्या प्रदर्शन गरे। उनी संसारकै सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी घोषित भए। त्यसै सभामा कर्णले अर्जुनलाई चुनौती दिए। विचरा कर्ण 'दासपुत्र' भएकैले अर्जुनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य मानिएनन्। वीरतालाई सम्मान गर्दै दुर्योधनले कर्णलाई अंगदेशको राजा बनाए। कृष्ण कुरुक्षेत्रका राजकुमारहरूबीचको यो द्वन्द्व नियालिरहेका थिए। यही मौका छोपेर उनी कूटनीतिका सोह्र कला प्रदर्शन गर्दै हस्तिनापुर छिरे।
जनता 'धार्मिक' थिए। ब्राह्मण र सन्यासी देवताजस्तै पुजिन्थे। राजारानीको खोपीमा समेत उनीहरू बिनारोकतोक प्रवेश पाउँथे। जनता र राजाबीच उनीहरू नै माध्यम हुन्थे। तिनका हरेक कुरा अन्धश्रद्धाका कारण जनता सत्य ठान्थे। विश्व बुक्सको प्रकाशन 'कितने खरे हमारे आदर्श'का अनुसार कृष्णले त्यतिखेर पुरोहितका नेता वेदव्यास र सन्यासीका नेता नारदको सहारा लिए। आफ्नो हत्या गर्न आउने पुतनालाई दूध चुसेरै प्राण हरेको, नागराजा कालिएको दमन, नागबस्ती ध्वंश, शिशुपाल बध, कंश बध, गोवर्द्धन पर्वतलाई औँलाले उठाएको, कुप्री बूढी कुब्जालाई मस्त तरुनी बनाइदिएका जस्ता चामत्कारिक खबर वेदव्यास र नारदबाट फैलाएर कृष्ण भारतवर्षमा आफूलाई ईश्वरका अवतार कहलाउन सफल भए। सत्य जाँच्ने कुनै माध्यम थिएन। ब्राह्मण र सन्यासीका कुरामा शंका गर्नु पाप ठानिन्थ्यो।
द्रौपदीसित बिहेपछि पाण्डवहरूको शक्ति बढ्यो। कृष्णले युद्ध हुने धम्की दिएपछि दुर्योधनले परिस्थिति आकलन गरेर पाण्डवलाई इन्द्रप्रस्थ राज्य दिए। उनीहरूलाई बस्न त्यतिबेलाको सबैभन्दा आधुनिक कलाद्वारा सुसज्जित महल बनाइदिए। यस्तो महल दुर्योधनकै पनि थिएन। एकदिन उनी पाण्डवको महल भ्रमण गर्न गए। महलको वास्तुकला अनुपम थियो। पानीजस्तो देखिने ठाउँमा जमिन र जमिनजस्तो देखिने ठाउँमा पानी थियो। दुर्योधन जमिन भन्ठानेर गएको ठाउँमा पानी थियो। उनी पानीमा डुबेको देखेर द्रौपदीले 'अन्धाको छोरा पनि अन्धा' भनेर अट्टहास गरिन्। पाण्डवहरू हाँसिरहे। दुर्योधनले बदला लिने प्रण गरे। कृष्णको कूटनीति अर्कोपल्ट फेरि सफल भयो।
कृष्णले भीष्म, विदुरलगायतलाई पनि आफू परमेश्वर भएको भान पारिसकेका थिए। उनी पाण्डवसँग भएपछि यो युद्ध जित्न असम्भव छ भनेर भीष्म बारम्बार दुर्योधनलाई सुनाउँथे। दुर्योधनले कौरव सेनापति बन्न आग्रह गर्दा सुरुमै भीष्मले तीन सर्त राखे, १) म सेनापतिरहुन्जेल 'सूतपुत्र' कर्णले युद्ध गर्न पाउँदैन २) म कुन्तिपुत्रहरूलाई बध गर्दिनँ ३) शिखण्डीविरुद्ध कुनै अस्त्र चलाउँदिनँ। सेनापतिले यसरी लडाइँ सुरु नहुँदै कौरव सेनाको पराजयको उद्घाटन गरिसकेका थिए। कर्णजस्ता महावीरले युद्धमा भाग लिन नपाउँदा कौरव पक्ष कमजोर हुने पक्का थियो। नभन्दै दसौँ दिनसम्म कौरव सेनाको तुलनामा पाण्डव सेना बलियो भइसकेको थियो। भीम, अर्जुनजस्ता महायोद्धाको अन्त्य नहुन्जेल कौरवको जित असम्भव थियो। कृष्ण पाण्डव पक्षबाट सेनानीका रूपमा नलडी अर्जुनका सारथी हुनुमा विशेष कारण थियो। सेनानीजस्तै लड्न गएका भए उनी अर्जुनसँग हुने थिएनन् र भावनामा बगिरहने अर्जुनले विचार बदल्ने खतरा थियो।
युद्ध सुरु हुनै लाग्दा कृष्णले कर्णलाई 'तिमी कुन्तीपुत्र हौ, त्यसैले पाण्डव पक्षमा लाग' भनेका थिए। यहिरहस्य कुन्तीले पनि कर्णलाई सुनाइन्। दुवैलाई कर्णलेे दुर्योधनको उपकारप्रति बेइमानी गर्न नसक्ने बताएका थिए। हो, उनले आफूलाई मर्ममै प्रहार गर्ने अर्जुनबाहेक चार दाजुभाइलाई नमार्ने बचन दिएका थिए। धृतराष्ट्रको पहिलो पुत्र युयुत्सु वैश्य दासी युवतीबाट जन्मेका थिए। यही कारण उनको युवराज हुने हक खोसिएको थियो। कृष्णको इशारामा कुन्ती र पाण्डव उनलाई उचालिरहेका थिए। युद्ध सुरु हुनै लाग्दा आफूलाई इच्छा लागेको समूहमा जान सबैलाई स्वतन्त्रता भएको उद्घोष गरियो। युयुत्सु कौरव सेना छाडी पाण्डव पक्षमा आए।
नकुल–सहदेवका मामा शल्यले कौरवलाई सघाउने सूचना कृष्णले कुन्तीलाई दिए। अन्ततः शल्यले कुन्तीलाई बचन दिए, 'धन्ना नमान्नुस्, मौका मिल्नासाथ म कौरव सेनालाई तेजोबध गर्छु।' नभन्दै उनले 'अर्जुनसामु तिमी केही छैनौ' भनेर कर्णको तेजोबध गरिरहे।
भोलिपल्ट पन्ध्रौँ दिनको युद्धमा द्रोणले पाण्डव सेनालाई सोत्तर पारिदिए। द्रुपद, विराटलगायत वीर राजालाई मारिदिए। कृष्णले सुझाए, 'अश्वत्थामाको हत्या नगरी आचार्यलाई शान्त गर्न सकिन्न।' भीमले कृष्णको आशय बुझेर दशार्थ देशका अश्वत्थामा नामक हात्तीलाई मारिदिए र द्रोणले सुन्ने गरी भने, 'तपाईं बेकारमा किन चम्किनुहुन्छ गुरुदेव? भर्खरै मैले तपाईंको छोरा अश्वत्थामालाई मारिसकेँ।' द्रोणले पत्याएनन्। 'युधिष्ठिरले भनेमात्र पत्याउँछु' भने। कृष्णको दबाबमा द्रोणका त्यति ठूला विश्वासपात्र युधिष्ठिरले अर्धसत्य बोले, 'मान्छे हो वा हात्ती, अश्वत्थामा मारिए।' 'मान्छे हो वा हात्ती' भन्ने वाक्यांश बोल्दा कृष्णले बेसरी शंख बजाए, भीमले ठूलो स्वरमा हल्ला गरे। द्रोणले 'अश्वत्थामा मारिए' भन्ने वाक्यमात्र सुने। उनी हतियार त्यागेर तुरुन्त योगासनमा बसे। यसैबेला धृष्टद्युम्नले द्रोणको शीर काटिदिए।
खासमा, कृष्णको जीवनकथा अनुपम सफलताशास्त्र हो। उनकै दूरदर्शिता र चलाखीका कारण पाण्डवहरूले लगभग असम्भव युद्ध जिते र राज्य पाए। यी सबै 'भगवान्को लीला' ठहरियो। उनै 'भगवान्'का सन्तान ५६ कोटी यदुवंशी आपसमा काटामार गरेर सखाप भए। एक व्याधाको वाण लागेर स्वयं कृष्णकै दुखद् निधन भयो। यसलाई पनि 'लीला' भनियो।
वास्तवमा सनातन समाजका यी युगपुरुष महत्त्वाकांक्षालाई निरन्तर पछ्याइरहने अत्यन्त चलाख, बौद्धिक र कूटनीतिक व्यक्ति थिए जसलाई ईश्वर बनाएर वेदव्यासले 'महाभारत' लेखे। चलाखीपूर्वक प्रचारयन्त्र प्रयोग गरी उनी ईश्वर र युधिष्ठिर सत्यवादी कहलिए। यही 'योग्यता'को अभावमा सत्य र इमानमा निष्ठावान् महावीर कर्ण युद्धसंहिताविरुद्ध मारिए र खलनायक ठहरिए।
शनिबार, ०४ भदौ २०७३, ०९ : ५४
काम कुरो एका तिर
यन्त्रमानव (लघु कथा)
सम्झनाको तरेलीमा तिमीसँगै तैरिदिँदा
आलोचना (अनूदित लघुकथा)
साँचो माया गर्ने ले
मेरो दिलमा तिमीले यस्तो गरेकी थ्यौ